Customizing a MmeziDisk: Okporo tozọ ka LFS | Site na Linux
Customizing a RepairDisk: Roadzọ nke LFS
woqr | | Emelitere na 25/07/2013 09:34 | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọtụtụ bụ oge anyị nwere iji rụkwaa usoro site na LiveCD, ma n'oge ụfọdụ na usoro anyị achọpụtala na anyị enweghị ngwá ọrụ yana mgbe anyị chọrọ ịwụnye ya, LiveCD OS na-agwa anyị na ọ gafeela ohere. na galik na mmiri (iji fuo ma jide).
Nsogbu a abịarutewo m n'ezie n'ihi ịbanye LFS (LinuxFromScratch), nke a ndu (B NOTGH a a nkesa onwe ya) iji wụnye Linux omenala. Isi okwu nke “nkesa” a bụ na site na LiveCD ọ bụla, yana iji ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị, ị na-ebudata koodu kernel na ngwaọrụ ndị ọzọ iji wuo usoro nke gị (na-achịkọta ihe niile nke nta nke nta). Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbaso usoro ntụpụ-aka, ị ga-achọ ọtụtụ ngwaọrụ na compilers, na enweghị ndụCD na ihe niile, yabụ na ị ga-ahazi otu.
Ka anyị mee ya. Anyị ga-eji Sisili, nke na-enye gburugburu ebe obibi zuru oke nke Gentoo.
N'ihe atụ anyị (ịwụnye Linux site na ncha na-eso Linux Site na Scratch book) anyị na-efu efu mmemme Bison na Makeinfo, yabụ anyị ga-ewepụta onyonyo ọhụụ nke diski a mana jiri ngwaọrụ ọhụrụ.
Rịba ama: Gentoo bụ nkesa na-achịkọta na ọnọdụ ngwugwu niile ka arụnyere, yabụ usoro ịgbakwunye na mmelite mmemme adịghị nwayọ.
Agbanye na ejiri njikwa ngwugwu (dị ka Debian's apt-get), kama ibudata nchịkọta, ebudata koodu iyi iji chịkọta ya na igwe gị.
Maka usoro ị ga-achọ nkebi Linux (ext4 dịka ọmụmaatụ) ma ọ dịkarịa ala 1.5G n'efu, ọ bụ ezie na a na-atụ aro ndị ọzọ. Y’oburu n’achoghi ikwusi nkewa gi, were igwe mebere ihe. N'ezie, ọ bụ ihe amamihe dị na nkewa nwere ọtụtụ gigabytes ebe ọ bụ n'oge usoro nke mkpokọta, echichi, mmekọrịta nke repositories ... achọrọ oghere nwa oge; M na-adụ ọdụ n'iji nkebi 8G + 2G gbanwee (na 4G + 1G ọ ga-ezu, mana anyị nwere ike ijide gị, ọ bụrụ na RAM / swap na-efu, usoro ahụ ga-adị nwayọ nwayọ).
Ka e were ya na ị mepụtara igwe na-emepụta ihe na diski 10G, ị na-amalite ya site na ịgwa ya ka ọ bido na sistemụ ọhụrụ ebudatara ọhụrụ. Ozugbo n'ime nkebi anyị na fdisk (ọ bụrụ na ịmalitela usoro ihe osise ị nwere ike iji obi ụtọ mee ya, mana ebumnuche nke post a bụ ịkụzi iji ngwaọrụ ndị bụ isi). fdisk bụ iwu mmekọrịta:
site na iji “n” anyi meputa nkewa ohuru
jiri nhọrọ "t" anyị gbanwee ụdị faịlị sistemụ nke ga-aga na nkewa
na nhọrọ «w» anyị na-ede na diski
na nhọrọ «q» anyị na-ahapụ na-enweghị na-ede mgbanwe
Mgbe anyị jiri nhọrọ "n" ọ ga - enye anyị ọtụtụ nhọrọ, oge niile anyị ga - eji ndabara, belụsọ mgbe mwube ngalaba ikpeazụ na ngalaba nke mbụ, nke anyị ga - ede "+ 8G", wee gosi mmemme ahụ na anyị chọrọ ka nkebi anyị nwee 8GB.
Mgbe ị na-ekepụta nkebi nke abụọ anyị ga-eji nhọrọ ndabara ebe ọ bụ na a ga-ejide ebe ndị ọzọ. Ọzọkwa, ịgwa fdisk na nkebi nke abụọ ga-abụ nke ụdị swap, jiri nhọrọ "t" (hexcode maka swap bụ 82). The interface dị ka nke a:
% fdisk / dev / sda Iwu (m maka enyemaka):
Ozugbo emechara ihe niile, anyị na-eji nhọrọ "w" dee mgbanwe ndị dị na diski wee pụọ.
Ugbu a ọ bụ oge usoro nkebi. Anyị ga-amalite na mgbanwe iji jiri ya ozugbo:
Anyị nwere usoro nhazi swap, yana iwu ahụ gbanwee anyị amalitela iji ya. Ugbu a, anyị na-edepụta nkebi mbụ na ext4:
Anyị nwere ike ịmalite ịgbaso usoro ndị akọwapụtara na http://www.sysresccd.org/Sysresccd-manual-en_How_to_personalize_SystemRescueCd, lee, m na-atụgharị / kọwaa ha na nkọwa adịghị mma.
Anyị na-arịgo nkebi n'ọnọdụ ya (LiveCD adịlarị njikere na folda / mnt / omenala ebe a ga-etinye ngalaba nke anyị ga-eme mgbanwe kwesịrị ekwesị). Ọzọkwa mgbe arịgoro anyị ga-ewepụ faịlụ ndị ahụ site na diski ahụ, a na-enweta nke a site na edemede nke akwadogoro. Ederede ahụ ga-ewe obere oge (ebe ọ na-atụfu ọtụtụ narị megabytes nke ebe nchekwa), ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele na ọ na-arụ ọrụ, gaa na ọdụ ọzọ (yana Alt + F4 dịka ọmụmaatụ) wee mee df -h.
% ugwu / dev / sda2 / mnt / omenala% / usr / sbin / sysresccd-custom wepụ
Ọ bụrụ na ị na-agagharị ugbu a n'ime / mnt / omenala / customcd, ị ga-ahụ ọtụtụ folda. Na / mnt / omenala / customcd / faịlụ achọtara mgbọrọgwụ faịlụ faịlụ. Ugbu a ọ bụ oge ichota usoro ihe ga-eme n'ọdịnihu. Lee, m ga-etinye iwu ahụ, maka ozi ndị ọzọ gbasara chroot ị nwere ike ịhụ nkuzi a m dere otu ọnwa gara aga
% mount -o bind / proc / mnt / custom / customcd / files / proc% ugwu -o kee / dev / mnt / omenala / customcd / faịlụ / dev% mount -o bind / sys / mnt / custom / customcd / files / sys% chroot / mnt / custom / customcd / files / bin / bash # gcc-config $ (gcc-config -c)
Anyị abanyelarịrị na sistemụ a chrooted, nke ga-abụ usoro LiveCD ozugbo anyị buuru ya. Anyị ga-etinye iwu ndị na-efu (bison na texinfo) iji iwu ahụ pụta (onye na-edozi ngwugwu nke were were site na gentoo).
Mbụ anyị mekọrịta osisi portage (nhata nke Apt-nweta mmelite)
# emerge-webrsync MARA: Anyi ji iwu a eme ihe karia “emerge –sync” nihi na o di ososo, dika o na etinye ihe ntanetiri na web. Nzọụkwụ a dị mkpa, n'ihi na ọ bụrụ na ị pụtaghị na ọ ga-apụta na-akpaghị aka -sync, na-ebelata ya.
Mgbe ịmechara osisi osisi ahụ, anyị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye nchịkọta:
# pụta sys-devel / bison # emerge sys-devel / texinfo
bison ga -ewe obere oge ichikota, nwee ndidi
Anyị na-ahapụ chroot:# exit
Anyị na-ewepụ "/ proc" ka e wee chekwaa ngwugwu ndị ọhụrụ arụnyere na squashfs. Anyị na-ewepụkwa "/ dev" na "/ sys" ka anyị ghara ichefu ma emechaa
Dika anyi nwere usoro skwọsh ohuru nke akwadoro, anyi meputara ya na iwu ndia
Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye faịlụ na onyogho ISO mana anyị chọrọ ka ọ pụọ n'èzí squashfs, anyị ga-etinye ya na folda «/ mnt / custom / customcd / isoroot»
N'oge a, onye ọrụ gọọmentị na-agwa gị na ị nwere ike ịtọ keymap buut ya na keyboard (dịka ọmụmaatụ "es" maka kiiboodu Spanish). Ma na-eme ọtụtụ ule, edemede nke ha ji m arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ ma ọ kpatara njehie mgbe m na-ebu kernel, yabụ m ga-awụpụ nzọụkwụ a.
Oge ahụ dị ebube eruola, anyị nwere ike iwepụta ọhụụ ISO ọhụrụ site na sistemụ anyị ahaziri iche!
"My_srcd" bụ aha anyị na-enye olu, ị nwere ike ịkpọ ya ihe ọ bụla ịchọrọ. A na-echekwa ihe oyiyi ahụ na «/ mnt / custom / customcd / isofile», na mgbakwunye a faịlụ .md5 na-eme generated
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na diski mebere, ihe dị oké mkpa ka dị: wepụ ihe oyiyi ISO nke usoro arụmọrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ya, m ga-akọwa nke dị mfe (na VirtualBox) iji zere ịwụnye "mgbakwunye ndị ọbịa" ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Anyị ga-eji onye ahịa iji nweta faịlụ ahụ site na ssh ọwara. Iji mee nke a, anyị ga-ebu ụzọ hazie usoro ndị ọbịa na paswọọdụ mgbọrọgwụ. Ihe nkesa ssh na-amalite na akpaghị aka, anyị ka na-amalitegharị ya ma ọ bụrụ.
Anyị ga-ahazi mbugharị ọdụ ụgbọ mmiri nke igwe arụmọrụ. Na VirtualBox a na-eme ya dị ka ndị a:
Access nweta nhazi igwe mebere
Na ngalaba netwọọdụ ịhazigharịrị ihe nkwụnye ọkụ na NAT
Lee maka ọdụ ụgbọ mmiri ebugharị nhọrọ
Gbakwunye iwu ọhụrụ, na sọsọ ihe “ọdụ ụgbọ mmiri” na “ọdụ ụgbọ mmiri ọbịa”
onye nnabata = 3022 na ọbịa = 22
Site na nke a, anyị emezuola ọdụ ụgbọ mmiri ahụ 3022 nke PC anyị bụ 22 nke igwe arụmọrụ. Anyị na-amalite Filezilla ahịa:
Na oke nkesa anyị na-ede: sftp: // localhost
Na aha njirimara anyị na-ede: mgbọrọgwụ
Na paswọọdụ oke anyị na-etinye onye anyị na-eji na «passwd»
Na oke ọdụ ụgbọ mmiri anyị dere: 3022
Pịa na «Ndenye njikọ»
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma na aka ekpe, anyị nwere ike ịnyagharịa na PC anyị na aka nri na igwe akụrụngwa. O zuru ezu iji nweta (na igwe mebere) na folda «/ mnt / custom / customcd / isofile» ma dọrọ ihe onyonyo ISO ebe anyị chọrọ na PC anyị.
!! Ekele !! Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma, ị nwere onyonyo ISO gị nke edobere na SystemRescueCD ahaziri ma dị njikere ị bido si CD, USB ...
Main mpụga njikọ: http://www.sysresccd.org/Sysresccd-manual-en_How_to_personalize_SystemRescueCd
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Customizing a RepairDisk: Roadzọ nke LFS
Kedu ezigbo ndu, dịtụ mgbagwoju anya mana ọ bara ezigbo uru.
Mgbe obere obere oge, na enweghi nkasi obi n'anya, aga m agụ ya nke ọma. O yiri ka ọ bara uru ma na-adọrọ mmasị ..
Ndewo woqer, ezigbo ọkwa!
M nọnyeere LFS ruo afọ ụfọdụ ma mepụta nke m nke nwere ike ijere gị ozi, ọ nwere ihe niile ịchọrọ iji chịkọta ebe ọ bụ LFS. Atụrụ m anya na ọ baara gị uru
Zaghachi Carlos Sanchez
A tọhapụrụ LibreOffice 4.1
Akpaka akwụkwọ ahụaja na-agbanwe agbanwe na-emetụ aka.